Maalgelinta Baaskiilka ee 2022: 6 Deymaha Ugu Fiican ee Helitaanka
Bogga ugu weyn Maalgelinta Baaskiilka 2022 -ka: 6 Deymaha Ugu Fiican Si Loo Helo
Maalgelinta Baaskiilka 2022 -ka: 6 Deymaha Ugu Fiican Si Loo Helo
Maalgelinta Baaskiilka waa hal hab oo la hubo oo lagu iibsan karo mootada cusub ama la isticmaalay ee aad dooratay adiga oo aan bangiga ka dhicin si kasta oo ay qaali u tahay.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Gaadiidka, in ka badan 457,000 mootooyin cusub ayaa la iibiyay 2018. Mootooyinkan intooda badan laguma iibsan nolol badbaadin ama mushahar. Boqolkiiba badan oo iibka ah ayaa la sameeyay iyadoo la isticmaalayo amaahda.
Asal ahaan, waxaa jira in ka badan 50 amaahiyaha amaahda mootada oo diyaar u ah inay ku siiyaan awoodda wax iibsiga; lacag si aad u hesho nooc kasta oo mootada aad rabto.
Haddii aad rabto mootooyinka iyo mootooyinka, baaskiilada isboortiga, baaskiilada qaawan, Cruisers, isboortiga Adventure, Touring mootooyinka, Baaskiiladaha wasakhda ah, baaskiilada Enduro ama baaskiilada Motocross, amaahda mootada mootada ee adiga kuu hesha.
Su’aashu waxay tahay, Kee baa iyaga ugu habboon?
Si lagaaga caawiyo inaad hesho jawaabta, waxaan samaynay liis ah 6 amaah -bixiyeyaal ugu wanaagsan ee amaahda Maalgelinta Mootada oo si fiican kuugu adeegi kara. Intaa waxaa dheer, si fudud ayaa loo heli karaa waxayna leeyihiin astaamo kale oo gaar ah oo aad jeclaan lahayd.
Si loo ururiyo liiskan, waxay ahayd inaan samayno cilmi -baaris, intii lagu jirayna, waxaan eegnay halkaas dulsaarka dulsaarka, shuruudaha iyo arrimo kale oo kala soocaya midba midka kale.
Si taxaddar leh u aqri!
Waa maxay Amaahda Maalgelinta Mootada?
Amaahda mootada inta badan waa deymo dammaanad leh, taas oo macnaheedu yahay inaad ku taageerto dammaanad oo inta badan ah mootada lafteeda.
Amaah la hubo micnaheedu waa in hantidaada dib loo qiimeyn doono haddii aad ku guuldareysato inaad fuliso lacagaha.
Dhinaca kale, waxaa lagugula talinayaa inaad aado deyn shakhsi ah oo aan la hubin haddii aad rabto inaad mootada u isticmaasho dammaanad ahaan.
Sababta ayaa ah in deyn shakhsi ah oo aan la hubin, deyn bixiyuhu ma soo celin doono guriga haddii aad ku guuldareysato. Caqabadda kaliya ee ku saabsan deynta noocaan ah waa inay leedahay dulsaar sare.
Qodobka la xiriira: 15ka Apps ee ugu Wanaagsan ee Gawaarida Gawaarida| Barnaamijyada Baabuur Raadinta ee ugu Fiican
Noocyada Amaahda Mootada
Deyn -bixiyeyaashu waxay si caadi ah u kala saaraan amaahda mootada iyo amaahda baabuurka si ka duwan. Deyn -bixiyeyaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku dallacaan dulsaarka dulsaarka mootooyinka mootada intii ay ka qaadi lahaayeen amaahda baabuurka.
Deyn -bixiyeyaasha qaarkood waxay u kala qaybsadaan foomamka amaahda mootada qaybo aad u ballaadhan, oo leh xulashada mootooyinka cusub ama duugga ah iyo tilmaamaha waxa la yidhaahdo iyo waxa aan loogu yeedhin mooto.
Deyn -bixiyeyaal badan ma bixiyaan amaahda mootooyinka wasakhda ah, mootooyinka ama ATV -yada.
Amaahda Mootada Noocee Ayaan Heli Karaa?
Asal ahaan, amaahda mootada iyo amaahda baabuurka way kala duwan yihiin. Waxay ku kala duwan yihiin dulsaarka dulsaarka iyo shuruudaha dib u bixinta. Laakiin, marka aad iibsanayso mooto cusub ama la isticmaalay, waxaa jira saddex ikhtiyaar oo maaliyadeed oo kala duwan:
Maalgelinta soo saaraha
Maalgelinta wax-soo-saarka ayaa laga heli karaa shirkado badan oo mootooyinka ah. Halkii aad ka maalgelin lahayd bangi dhinac saddexaad ah ama dilaal, waxaad si toos ah maalgelin uga helaysaa soo saaraha.
Iyada oo ku xidhan meheradda, waxaad awoodi doontaa inaad lacag u hesho mootooyinka cusub iyo kuwa la isticmaalay.
Amaahda warshadeeyayaasha waxaa taageera baaskiilkaaga, kaas oo hubinaya in soo-saareyaashu ay qabsan doonaan gaarigaaga haddii aad dib uga baxdo lacag bixintaada.
Sida aan hore u soo sheegay, deymaha shakhsi ahaaneed waa deymo aan la hubin oo la socda dulsaar sare. Waxaad ka heli kartaa bangiyada, ururada deynta, iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed.
Asal ahaan, waxaa loo isticmaali karaa maalgashi kasta oo weyn, oo ay ku jiraan hagaajinta guriga ama iibsashada mootooyinka cusub ama kuwa la isticmaalay. Amaahda shakhsi ahaaneed, waxaad ku heli kartaa lacag.
Amaahda mootada waa amaahda gaarka ah ee ay bixiyaan bangiyada, ururada amaahda iyo amaahiyeyaasha internetka.
Iyadoo ku xiran dayn -bixiyeha, waa la damaanad qaadi karaa ama lama sugi karo. Ogow, amaah kasta oo mootada ah waxay leedahay xad ku saabsan sida lacagta loo isticmaali karo, sida inay kugu qasbaan inaad iibsato mooto cusub halkii aad isticmaali lahayd.
Qodobka la xiriira: 21 Goobo sharci ah sida Craigslist si aad u iibsato oo aad u iibiso Alaabada la adeegsaday
Waa imisa Kharashka Amaahda Mootada?
Si aad u hesho amaahda mootada run ahaantii wax badan kuma kici doonto.
Asal ahaan, amaahda mootada caadiga ah badiyaa waxay u baahan yihiin oo keliya bixinta dulsaarka inta la amaahday.
Heerarka ugu hooseeya ama ka hooseeya 3.49 boqolkiiba APR ayaa la heli karaa haddii aad hesho amaahiyaha saxda ah. Dadka leh dhibco aan fiicnayn ayaa laga yaabaa inay bixiyaan APR 10% ama ka badan.
Si kastaba ha ahaatee, dadka amaahda leh ee qaata amaahda shaqsiyeed si ay u iibsadaan mootada waxaa laga yaabaa inay bixiyaan khidmad maamul ama asal ahaan boqolkiiba dhawr ee qaddarka la amaahday.
Sidee bay suurtogal u tahay in loo helo Amaah Mootada la Adeegsaday?
Caadi ahaan, waxaad isticmaali kartaa amaahda mootada inkasta oo waxyaabaha gaarka ahi ay kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran deyn -bixiyeha aad dooratay.
Deyn -bixiyeyaal tiro yar ayaa leh lacago deyn oo ugu yar oo aan la dabooli karin markay iibsanayaan baaskiiladaha duugga ah, halka deyn -bixiyeyaal kale laga yaabo inay mootada ku xaddidaan da'da sannadka.
Lahaanshaha amaahda baaskiilka ee la isticmaalay qasab ma aha fikrad xun, laakiin ku bixinta mootada lacag caddaan ah ayaa badbaadin karta xiisahaaga.
Waa Maxay Dhibcaha Deynta Wanaagsan ee Amaahda Mootada?
Dhibcaha dhibcaha ee aadka u fiican ayaa kaa caawin doona inaad dalbato heshiisyada ugu fiican. Amaahda mootada oo leh qiimeynta dhibcaha hoose, sida 600, ayaa sidoo kale suurtogal ah.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad qorshaysaa inaad bixiso dulsaarka sare ee deyntaada.
APR -yada ayaa hoos u dhici kara marka dhibcaha ay gaaraan 700s iyo 800s, iyagoo u malaynaya inaad raacdo shuruudaha kale.
Maxay yihiin Amaahda Mootada ugu Fiican ee si fudud lagu heli karo?
Hoos waxaa ah 6 Deyn -bixiyeyaasha Mootooyinka ugu fiican oo si fudud loo heli karo:
Midowga Amaahda Federaalka ee Dijital ah
Aan si kooban uga hadalno iyaga!
LightStream waa mid ka mid ah amaah bixiyayaasha maalgelinta mootada ugu fiican oo aad si fudud uga heli karto amaah.
Mid ka mid ah xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan amaah bixiyaha mootada ayaa ah inay bixiyaan deymo aan la hubin oo leh dulsaar hoose oo u dhaxaysa 4.29% ilaa 11.89% (oo ay ku jirto 0.50% dhimis iskiis ah).
Shirkaddu waxay kaloo ogolaataa deymo u dhexeeya $5,000 iyo $100,000. Waxaad u baahan doontaa inaad haysato credit wanaagsan ilaa heer sare si aad u codsato amaah.
Sida laga soo xigtay Equifax, tan macnaheedu waa in darajaynta ay ahaato inta u dhaxaysa 670 iyo 850.3.
Haddii dhibcaha dhibcahaagu ka baxsan yihiin xadka, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wax ka qabato amaahiye kale.
LightStream ma laha astaamaha amaahda u-qalmitaanka kahor, marka waa inaad maraysaa baaritaan dhibco adag si aad u ogaato dulsaarka aad heli karto iyo haddii laguu oggolaado amaah.
Iyada oo ku dhex jirta shuruudaheeda amaahda adag, LightStream waxay leedahay awood ka sarraysa amaah-bixiyeyaasha kale sababtoo ah heerarkeeda dulsaarka hooseeya, xulashooyinka madax furashada ee kala duwan, iyo maalgelinta amaahda degdegga ah.
Haddii aad deyn ka hesho LightStream, waxaad heli doontaa lacagtaada isla maalintaas oo waxaad xiri doontaa heshiiska lala galay ganacsadaha baaskiilka.
Hel maalgelintaada isla maalinta aad dalbato
Deyn -bixiyuhu wuxuu dalbadaa deyn aad u fiican.
Ma jiro wax lacag bixin ah oo loo baahan yahay Xaddiga deynta ugu yar waa $ 5,000
0.50% sicir -dhimista dulsaarka haddii aad iska qorto bixinta otomaatiga ah Ma jiro qalab u qalma amaahda oo la heli karo.
Booqo bogga rasmiga ah si aad wax badan uga ogaato.
Qodobka la xiriira: 10 Siyaabood oo lagu Noqdo Wakiilka Saxiixa Amaah oo lagu kasbado $ 150/saac 2021
#2. Harley Davidson-
Harley-Davidson waa mid ka mid ah soosaarayaasha mootada ugu caansan adduunka. Sanadka 2019, ku dhawaad ​​126,000 baaskiil ayaa lagu iibiyay gudaha Mareykanka, taas oo ka badan laba jibaar cadadka ay iibiyeen warshadeeyayaasha oo ay ku jiraan Yamaha iyo BMW ee Mareykanka.
Harson-muddo dheer sumcadda Davidson ee mootooyinka ayaa sii ahaanaysa mid ka raaxo badan kuwa ka soo horjeeda.
Adeegyada Maaliyadeed ee Harley-Davidson, haddii aad leedahay sumcad aad u wanaagsan, waxaad ku maalgelin kartaa baaskiil cusub ama la isticmaalay.
Harley-Davidson waxa ay haysaa dalabyo amaahin oo kala duwan oo la heli karo, oo ay ku jiraan $0 qorshooyin lacag-bixineed oo leh qiimayaal dulsaar yar iyo wakhtiyo amaah ah oo ilaa todoba sano ah.
Laga bilaabo 2020, Harley-Davidson waxay leedahay deymo qiimahoodu hooseeyo 3.49 boqolkiiba.
Haddii aad rabto inaad Harley ka iibsato xaflad gaar loo leeyahay, Harley-Davidson ayaa kaa caawin doonta in heshiiska uu noqdo mid sahlan.
Waxaad lacag ka heli doontaa Harley-Davidson Khayraadka Maaliyadeed ka dibna waxaad kula kulmi doontaa iibiyaha meesha ugu dhow ee Harley.
Ganacsadaha ayaa kaa caawin doona dhammaystirka iibinta iyo wareejinta lahaanshaha baaskiilka.
Xusuusnow, amaahda dhaqaale ee Harley-Davidson waa la sugay. Taas micnaheedu waa, haddii aad dib u dhigto lacag -bixintaada, deyn -bixiyuhu wuxuu baaskiilka dib ugu celin doonaa ammaan ahaan.
Waxaad amaahda u adeegsan doontaa oo keliya inaad ku iibsato baaskiilada Harley-Davidson, iyo qiimayaasha ugu hooseeya ee la xayaysiiyay iyo shuruuddu waxay ku ansaxayaan oo keliya moodooyinka la xushay.
Gear iyo agabka ayaa lagu dari karaa qiimaha amaahda
Waxaa kaliya lagu isticmaali karaa moodooyinka Harley-Davidson
Amaahda loo heli karo moodooyinka cusub iyo kuwa la isticmaalay Amaahda waa la sugay
Deymaha dulsaarka hooseeya oo aan lacag bixin hore la heli karin Dalabyada maalgelinta lama heli karo dhammaan moodooyinka
Si aad wax badan uga ogaato deyn -bixiye guji xiriirka hoose.
#3. Midowga Amaahda Federaalka ee Dijital ah
Digital Credit Union sidoo kale waa mid ka mid ah amaah bixiyayaasha mootada ee ugu sareysa ee si fudud lagu heli karo. Shirkaddu waa urur deyn, iskaashato maaliyadeed oo aan faa'iido doon ahayn oo ay leeyihiin xubnaheeda oo ka badan 850,000 xubnood dalka oo dhan.
DCU oo sida caadiga ah loogu yeero waxay bixisaa amaahda mootada oo sugan oo qiimaheedu yahay 3.50% ilaa 4.25%, oo ay ku jirto dhimiskeeda 0.50% ee bixinta tooska ah ee mootooyinka waddooyinka.
Halka mootooyinka ka baxsan waddooyinka, dulsaarku wuxuu u dhexeeyaa 7.85% ilaa 8.35%.
Sidoo kale, DCU waxay kuu oggolaaneysaa inaad amaahato ilaa 125% qiimaha iibsiga mootada. Tani waxay kuu suurtogelinaysaa inaad kala soocdo kharashyada diiwaangelinta, iibsato dammaanad dheeri ah, ama aad hesho qorshe ilaalin adeeg oo baaskiilkaaga cusub.
Xusuusnow, si aad ugu qalanto amaah shirkadan, waa inaad haysataa sumcad aad u fiican, aad leedahay qaraabo ka tirsan qoyska DCU, aad lammaane u tahay urur aan macaash doon ahayn, oo aad yeelato hawlgal aad ku dhex waddo mid ka mid ah bulshooyinka adeegga DCU.
Heerarka ribada hoose Waa inuu noqdaa xubin ka tirsan ururka deynta si uu xaq ugu yeesho amaah
Waxaad deynta u isticmaali kartaa inaad ku iibsato baaskiilada cusub ama la isticmaalay Daynta ugu dheer waa shan sano.
Waxaad deynsan kartaa ilaa 125% qiimaha mootada Heerarka dulsaarka sare ee mootooyinka ka baxsan waddada
Wells Fargo waa mid ka mid ah shirkadaha maalgelinta mootada ugu fiican oo aad si fudud u geli karto. Sidoo kale waa tan ugu fiican marka la eego deymaha gaarka ah.
Tani waa sababta oo ah shirkadu iyada oo aan lahayn wax dammaanad ah, ganaax hore u bixin, codsi, ama khidmadaha asalka ah, waxay kuu ogolaaneysaa inaad amaahato ilaa $100,000.
Sidoo kale, macmiil leh koontada jeegga ama keydinta, waxaad heleysaa qiimahooda ugu hooseeya oo u dhexeeya 5.74% ilaa 24.49% oo leh sicir -dhimista xiriirka.
Oo waxaad deyn ku heli kartaa onlaynka ama taleefanka haddii aad leedahay koonto bangi oo Wells Fargo ah.
Xitaa haddii aadan ahayn macmiilka Wells Fargo, weli waad dalban kartaa amaah, laakiin waa inaad shaqsi ahaan u codsataa laanta Wells Fargo. Haddii la oggolaado, deyntaada waxaa lagu bixin doonaa wax ka yar hal maalin shaqo.
Amaahi $ 3,000 ilaa $ 100,000 iyada oo aan dammaanad lahayn Waa inaad noqotaa macmiil Wells Fargo si aad ugu qalanto qiimayaasha xayeysiiska ugu hooseeya
Ma jiro khidmad asal ah ama dalab Waxaa laga yaabaa inaad shaqsi ahaan u dalbato
Shuruudaha amaahda inta u dhexeysa hal ilaa toddoba sano Wanaagsan ilaa dhibco aad u fiican ayaa loo baahan yahay.
Qodobka la xiriira: Halkee Laga Heli Karaa Amaah Soo Celinta Canshuurta|Meelaha Ugu Fiican
Avant waa shirkad amaahiya oo ku takhasustay amaahda aan la hubin ee shakhsiyaadka leh amaahda wanaagsan ama aadka u xun.
Inta badan kuwa wax amaahda ee u qalma amaahda Avant waxay leeyihiin dhibcaha dhibcaha inta u dhaxaysa 600 iyo 700, markaa waxaad u badan tahay inaad deyn ka codsato Avant marka loo eego amaahiyeyaasha kale.
Avant wuxuu leeyahay astaamo u-qalmitaan kahor, markaa waxaad xaqiijin kartaa u-qalmitaanka amaahdaada adigoon waxyeello u geysan dhibcaha dhibcahaaga. Markaad rabto inaad dalbato amaah, waxaad ka dalban kartaa internetka oo aad u qalmi kartaa deyn u dhexeysa $ 2,000 iyo $ 35,000. Haddii la aqbalo, deyntaada waxaa lagu bixin karaa wax ka yar hal maalin.
Maaddaama Avant uu u adeego kuwa leh deyn ku habboon, waxay leedahay dulsaar ka sarreeya qaar ka mid ah bixiyeyaasha amaahda shaqsiyeed, oo qiimahoodu u dhexeeyo 9.95 boqolkiiba illaa 35.99 boqolkiiba.
Waxay ka yar tahay fursadaha fidinta amaahda marka loo eego bixiyeyaasha badankooda, iyadoo leh waqti amaah oo kooban oo kaliya shan sano.
Waxa xusid mudan in Avant uu ka qaado kharashaadka hawlgalka. Khidmaddu waa boqolkiiba 4.75 taasoo laga jaray inta amaahdaada ah intaan la bixin.
Tusaale ahaan, haddii aad dalbatay deyn $ 5,000 ah oo aad lahayd 4.75% khidmad maamul, $ 237.50 ayaa laga jari doonaa wadarta deynta.
In kasta oo Avant ay ku dallacdo khidmado ayna leedahay dulsaar suurtogal ah oo sarreeya, sababtuna tahay shuruudaha dhibcaha dhibcaha ee hooseeya iyo maalgelinta amaahda degdegga ah, waa doorashada ugu fiican dadka leh sumcad xumada.
Amaahi $ 3,000 ilaa $ 100,000 iyada oo aan dammaanad lahayn Heerarka dulsaarka laba-lambar
Amaahiyayaasha leh sumcad sare waxay u qalmi karaan amaah Lacagta maamulka ayaa khuseysa
Waxaad heli kartaa ilaa $ 35,000 hal maalin shaqo gudaheed Muddada amaahda ugu badan ee shan sano
USAA, oo la aasaasay 1922, waa adeegyo maaliyadeed iyo shirkad caymis oo diiradda saareysa u adeegida baahiyaha ciidamada milatariga, mujaahidiinta iyo qoysaskooda.
USAA waa mid ka mid ah amaahda mootada ugu fiican ee loogu talagalay millatariga iyo ruug -caddaaga sababta oo ah waxay rabaan inay la qabsadaan duruufaha gaarka ah ee xubnaha milatarigu la kulmaan.
Amaahda mootada ee USAA, waxaad ku iibsan kartaa baabuur cusub oo la isticmaalay, mootooyinka iyo baaskiilada wasakhda ee waddada ka baxsan.
Amaahdaani waxay la timaadaa APR -yada ugu hooseeya 5.99 boqolkiiba, oo ay ku jirto 0.25 boqolkiiba dhimista otomaatiga ah, iyo waqtiyada amaahda ilaa 72 bilood. Waa inaad maalgelisaa ugu yaraan $ 5,000 si aad u dalbato shuruudo 12-ilaa 48-bilood ah, $ 10,000 ilaa $ 15,000 muddo 60 bilood ah, iyo $ 15,000 ama ka badan muddo 72 bilood ah.
Saamiga amaahda-qiimaha waa inuu ahaado 90% ama ka yar. Xusuusnow, ma jiro shuruud dhibcaha dhibcaha ugu yar.
Waxaad u baahan doontaa dukumenti saxeexan oo leh tafaariiqle ama faahfaahinta cinwaanka xisbiga gaarka ah. USAA waxay kaaga baahan tahay inaad saxiixdo waraaqaha amaahda oo aad u dirto jeeg adiga ama amaahiyaha milkiilaha hore adoo adeegsanaya FedEx, kaasoo qaadanaya inta u dhexeysa hal ilaa saddex maalmood oo shaqo.
Macaamiisha USAA waxay daliishadaan waayo-aragnimo dhibco-la'aan dhib la'aan ah iyo adeeg macmiil oo wanaagsan laakiin shuruudaha amaahda adag ee qiimeyntooda.
Qodobka la xiriira: Amaahda Bilowga Xirfadda USAA: Ogow tan ka hor intaadan deyn qaadan 2021
Sida Looga Iibsado Dukaanka Pawn | Talooyinka Ugu Fiican
Sida Loo Helo 800 Dhibcood | Tilmaamaha Fudud
Amaahda Ardayda Bangiga America: Dib -u -maalgelinta iyo Beddelka
Meesha ugu raqiisan ee aad kaash ku gali karto
Sida Loo Doorto Bangiyada Bixiya Baahidaada
Iibinta saqafka alwaaxa dib-u-warshadaynta waa hal fikrad dakhli dadban oo faa'iido leh oo laga yaabo inaadan ka fikirin. Halkan…
10 Shabakadaha Qurxinta leh oo leh Shixnad Bilaash ah sanadka 2022
Maqaalkani wuxuu iftiiminayaa websaydhyada qurxinta ugu fiican oo leh dhoof bilaash ah. Qiimaha dhoofintu waa go'aaminta ugu weyn…
100+ Istiikaro Bilaash ah oo aad ka codsan karto Shirkadaha 2022
Haddii aad jeceshahay sumad gaar ah, ku dhejinta dhejiskooda hantidaada gaarka ah waxay ku tusi doontaa inaad...
10 Baabuur Ee Aduunka Ugu Qaalisan
Baabuurtu maaha gaadiid oo kaliya balse waa bandhig hodantinimo iyo raaxo. Raaxadan orodka ah ayaa dhaca...
Qof kastaa wuxuu jecel yahay kaarka hadiyadda bilaashka ah! Laakin, marka ay noqoto kaarka hadyada la bixiyo, waxaan u janjeernaa inaan waydiino...
Immisa ayee ku kacaysaa in la bilaabo Podcast -ka 2022 | Tilmaan Buuxo
Podcast waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu xiro macaamiishaada ganacsi ahaan. Xitaa taas, inta badan…
Sida Loo Helo Kaararka Hadiyada Dalku-galka 2022